Chii chinosimudza mumusika wepasirese wemari yemari | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi leverage mumusika wemari?
Mukati meichi chikamu chehupfumi, tinogona kuwana akateedzana mafambiro uye mafambiro ekudzora nawo njodzi dzinogona kufungidzirwa pamari yakadyarwa mumusika wemasheya. Iyi sisitimu inozivikanwa yemari inowedzera.
Kuita bhizinesi pamusika wekutengesa ndechimwe chezviitiko zvemari zvinogona kuve nemhedzisiro zvakanyanya kune vechidiki vatengesiZvese zvakanaka nezvakaipa, uye kazhinji, izvo zvinoisa musiyano mune chimwe nechimwe chezvinhu izvi chiitiko chakaunganidzwa, pamwe nenhanho yenjodzi iyo mumwe nemumwe wevatori vechikamu muchiitiko chehupfumi ichi chaanoda kuita.
Nekudaro, pane zviitiko zvevanhu vakagadzira hupfumi hushoma nekuzvipira hupenyu hwavo kuna kutenga-kutengesa kufamba mumusika wekutengesa, Asi kune zvekare zvimwe zviitiko zvakawanda, zvimwe zvakawanda, zveavo vanhu avo mukubwaira kweziso, sezvavangadai vakaisa mari yavo mubheji rekasino, vanopedzisira vaona mari yavo kana zviwanikwa zvakaunganidzwa zvemakore mazhinji basa uye nesimba.
Iwo ndiwo maviri akanyanyisa ayo munhu anogona kuwana mune iri mhando rebhizinesi, asi pasina kupokana pane zvese mhando dzenyaya uye mamiriro kuti ivo vanogona kuverenga imwe yakati wandei yebudiriro uye kukundikana izvo zvinoshandura kudyara mumusika wemasheya kuita chiitiko chezvehupfumi chemazhinji ma nuances nezve izvo hapana chakavimbiswa.
1 Chii chinonzi hupfumi hwemari?
2 MaCFDs kuti akwanise kuisa mari nemari
3 Nzira yekuderedza njodzi kana uchinge waisa muyero?
Chii chinonzi hupfumi hwemari?
Nemashoko akareruka, mari yezvemari ine fomu yemari inoreva mukana wekutarisira mari yakawanda mumisika, kupfuura zvatiri chaizvo panguva iyoyo. Ndokunge, ndezvekutamba nekuisa njodzi capital isu tisina fomu yemvura. Izvi zvinogoneka nekuda kwekuti kune zvimwe zvigadzirwa zvemari zvinotibvumidza kuita aya marudzi ekufambisa.
Izvo zvakakodzera kutaura izvo kukosha kwekuwedzera kwemari Munguva dzazvino dzakapfuura nenzira yekuti haisi kungowanikwa chete munyika yemari, asi isu tinogona kuzviisa mukuita, nenzira yakakosha, muhupenyu hwedu hwezuva nezuva, kutanga kubva kuhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Muenzaniso wekutanga watinogona kutaura nawo zvaingave chiyero mukuita ndiko manejimendi uye kubata kwezvikwereti, nekuti ndizvo chaizvo zviri kuita masevhisi aya, kutenga kuburikidza nemari yakawanda yatisina kuwana panguva yekutenga, uye nekudaro tichaita muripo pamwedzi.
Semuenzaniso, kana iwe ukatenga mota inokosheswa panosvika zviuru makumi maviri euros, vanogona kuronga pamwe nesangano remota kubhadhara kwekutanga kweanosvika zviuru zvina zvemayuro uye zvinoreva kuti uri kuzvisimbisa pachiyero che20.000 kusvika 4.000, ndiko kuti, tora tsime, urikuisa muchikamu chechishanu chekukosha kwaro kumberi, kunyangwe iwe wakaronga kugadzirisa mune akateedzana ekubhadhara kwemwedzi.
Ichi chiitiko chekutanga ndechekutsanangura mashandisiro emari anogona kushandiswa kunyangwe muhupenyu hwedu hwezuva nezuva tisingazvizive. Nekudaro, mune yemusika wemusika, chiito ichi chinowana chirevo chakakura uye, chokwadika, chine mhedzisiro yakadzika.
MaCFDs kuti akwanise kuisa mari nemari
Panyaya iyi, kana isu tichida kutenga imwe huwandu hwezvikamu kubva kune imwe kambani uye kune imwe huwandu hwemari, huwandu hwacho hwakakosha kwazvo kutsanangura kurasikirwa kunogona kuitika kana mibairo yatinogona kuve nayo kune yakataurwa mari. Semuenzaniso, kuburikidza neCFDs inozivikanwa (zvibvumirano zvemusiyano), isu tine mukana wekutenga zvikamu zvemutengo unopfuura mari yedu yazvino yemari, kuti tikwanise kuwana purofiti yakakura tisina kubhadhara mari yakawandisa kamwechete.
Nemashoko akareruka, zviyero zvine mhando yenjodzi yekuwedzera mhedzisiro, chishandiso chemari chine mikana yakawanda yekuwedzera purofiti nekukasira, asi inova panguva imwechete imwe yenzira dzekudyara dzine njodzi, kunyanya kune vatangi vekutanga varikungotora matanho avo ekutanga murudzi urwu rwebhizinesi, ndosaka izvo zvisiri yakakurudzirwa zvachose kune vanhu ava.
Naizvozvo, kana isu tikaronga kutora zvikamu zana zvekambani izvo zvine iwo makumi maviri ema euro, asi isu hatina mari inowanikwa yekutenga zvakati, izvo zvingave zvingangoita 100 euros, iyo yekuwedzera ine kupa broker muzana of akati sum, yaanobvunza se garandi yekugona kukuwedzera iwe. Nenzira iyi, iwe unogona kuisa mari, semuenzaniso, 5% yemari yekutanga yekutenga masheya, ayo anozove angangoita zana euros muhuwandu, asi pasi pemaitiro aya, mabhenefiti ayo anozoverengerwa sehuwandu hwezvikamu yakaenzana ne100 euros, uye chinhu chinonakidza nezve chiitiko ichi chinoratidzwa pamwe nemhedzisiro miviri inogona kubuda kubva pairi.
Mhedzisiro yekutanga iyo yaizotarisirwa kubva mukushandisa kweiyo yekuwedzera, zvinovakirwa pane zvingawanikwa iyo inogona kuwanikwa nekuburitsa zvakanaka zviitiko, uye ine zvinotevera: kana isu tikawana purofiti ye10% pamwe neCFD yedu yekudyara, yedu chaiyo purofiti yaisazove ne10% yemari yedu yekutanga, inova zana euros, asi 100% yeiyo yatinowana neye broker, ndiko kuti, 10% ye10 euros, iyo yakazara inomiririra purofiti ye2000 euros, kwatinowana iyo mambure purofiti ye200 euros, yatakazopedzisira taipeta iyo yekutanga huwandu hwatinoisa sekutanga mari.
Ziso rakashama, maitiro aya anogona kutaridzika kunge anokwezva Kune chero munhu anofarira mhando dzekufamba kwemari, asi sezvakambotaurwa, hazvikurudzirwe kuti vanhu vasina ruzivo vatore mhando iyi yenjodzi, uye chikonzero chatichaona nenyaya inotevera inogona kumuka kubva kune inowedzera mari.
Muchiitiko chechipiri, mhedzisiro haina kugutsa zvachose nekuti pano tiri kutaura nezvekurasikirwa uye kwakakura kwazvo. Mhedzisiro yakaipa ndeyekuti kana iyo masheya atinotenga anodonha uye isu tine kurasikirwa ye10%, ipapo tinenge tisina kurasikirwa ne10% yemadhora edu ekutanga zana, asi kurasikirwa kwacho kuchave gumi muzana yemadhora mazana maviri ayo broker akapinda kuburikidza nekukwirisa, kunyangwe dai tisati tambopa broker. Mune ino mamiriro, kana iyo mari yekuvhara kurasikirwa isipo muaccount yedu, zvinoitika ndezvekuti broker anochengeta izvo zviripo, anosiya iyo account mu zero uye nekukurumidza anotiburitsa kunze kwemusika.
Nzira yekuderedza njodzi kana uchinge waisa muyero?
Iyo inonakidza nzira yekudzora zvinogoneka kurasikirwa kusvika padiki kuisa nemutengesi wako izvo zvinozivikanwa se "kumira kurasikirwa", kune izvo zvakakosha kuti uzive mutsauko uripakati pemari yakadyarwa uye capital capital, maitiro anosanganisira anotevera:
Mari yakasimwa ndizvo zvatinoisa patafura, ndiko kuti, patinopa broker wedu nezve 2000 euros kutenga 100 masheya ku20 euros imwe neimwe, yeimwe kambani, isu tiri kudyara iwo ma2000 euros akadaro, zvimwe hazvidi kutaura kuti isu tese tine iyo huwandu huwandu huri panjodzi, nekuti nekuda kwa rega kurasikirwa, tinogona kumisa otomatiki kana kukosha kwemasheya kwatanga kudzikira, uye ndipo panopinda pfungwa yehutongi hwemari.
Mari yengozi inosanganisira kushandisa iyo rega kurasikirwa kuti titengese masheya edu nekukasika pavanotanga kuwira kune imwe nhanho. Semuenzaniso, pazvikamu zana zvakatengwa ku100 euros imwe neimwe, kudzora njodzi yekurasikirwa, tinogona kunyorera rega kurasikirwa pa18 euros, zvinoreva kuti panongowira kukosha kwechikamu chimwe nechimwe kubva pamakumi maviri kusvika makumi masere euros, zvikamu zana zvichatengeswa zvoga, saka tichazvidzivirira kubva mukukanganisa kwekuti mutengo wazvo unoramba uchidzikira nekukurumidza. Mune ino kesi isu tichangorasikirwa ne20 euros pachikamu, uye nekudaro tichave tichifungidzira njodzi chaiyo ye18 euros, inova ndiyo ngozi yedu capital ye100 iyo yakaiswa mari. Muchidimbu, inzira inoshanda yekubuda mumutambo maonero asati anyanya kuoma, nekuti mune iri bhizinesi kukosha kwechikamu kunogona kungoerekana kwapetwa kaviri, kana kudonha zvakanyanyisa kudzamara yarasikirwa nechero kukosha kwayo.
Sezvatakakwanisa kucherechedza, Iko kushandiswa kwezvekudyara kwekudyara mumusika wemasheya kunoshanda seimwe yeanonyanya kuvandudza uye anonakidza njodzi njodzi zviripo nhasi, nekuti kushandisa kwayo zvine hungwaru kunogona kuunza purofiti zvakanaka kupfuura izvo zvinowanzo kusiiwa nekutenga kwakajairika kwemasheya. Nekudaro, inofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti chishandiso chine njodzi kwazvo chemari, icho chinogona kusanganisira kurasikirwa kukuru kwazvo uye kuti chinofanira kusiirwa kune vane ruzivo vane ruzivo, nekuti ndivo vane ruzivo uye zviwanikwa zvekutarisana nazvo zvese. mhando yezvisingatarisirwe kana kurasikirwa kwehupfumi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Chii chinonzi leverage mumusika wemari?
Maximum Pension uye Minimum Yekurega Pension mu2018
Mari hairari: kudyara muvhiki